Indlela Yokuya eMontreal
Amapulani, Izitimela Nezimoto: Indlela Yokuya eMontreal
by I-Sherel Purcell
I-Montreal, idolobha laseCanada elinamaphesenti amabili ngemuva kweToronto, liyindawo enhle yokuvakashela. Leli dolobha yamasiko linethonya elinzima laseFrance, ngakho uzozizwa sengathi useYurophu kunaseNyakatho Melika. Kungakhathaliseki ukuthi uthatha imoto, indiza, isitimela noma ibhasi ukuya eMontreal, ukufika kuleli dolobha eliyinkimbinkimbi, elimlando kuwufanele umzamo.
Uma ungathanda ukuthatha ibhasi e-Montreal, i-Trailways ne- Greyhound inokuhamba nsuku zonke ukusuka emadolobheni amakhulu ase-US naseCanada, kuhlanganise naseNew York naseChicago.
Izikhathi zokuhamba nezindleko zokuhamba:
Trailways NY, NYC - Montreal: amahora ayisishiyagalolunye; kusuka ku-$ 86 enye indlela
Trailways NY, Albany - Montreal: Amahora ayisithupha; kusuka ku-$ 53 ngenye indlela
Greyhound, Chicago - Montreal: amahora angu-22; kusuka ku-$ 85 enye indlela
Isiqhingi esiphakathi koMfula iSt. Lawrence, iMontreal lihamba ngehora elilodwa enyakatho yeVermont - New York emngceleni kanye namahora amahlanu empumalanga yeToronto. IQuebec City cishe cishe amahora amathathu. Inhloko-dolobha yaseCanada, e-Ottawa, ihora amahora amabili.
Izindiza eziningi ezinkulu zikhonza i-Pierre Elliott Trudeau International Airport. Kuyi-$ 40 yekhishi yokuhamba edolobheni. Kuye ngomgwaqo, uhambo luzothatha phakathi kwemizuzu engu-40 kuya ehoreni. Uma ngabe isiFulentshi sakho sibuthakathaka, kungcono ukubhala igama lokuya kwakho.
I-Montreal Airport Transportation
Ibhasi le-747 Express Aeroport ligijima enkabeni yedolobha (777 Rue de la Gauchetiere, eYunivesithi) nasesiteshini samabhasi esiteshini sangasese esiseduze ngaphesheya kwesiteshi sesitimela saseBerri-UQAM (esitimeleni) ngezindawo eziningana zedolobha elisemadolobheni.
Amathikithi ayi-$ 10 ngendlela eyodwa.
Ibhasi likawonkewonke 204 empumalanga eliphuma emaphandleni angaphandle (izinga lomhlabathi) yonke ihafu yehora ukuya esiteshini sesitimela saseDorval. Kusukela kuDorval, udlulisela ebhasi elimemezelayo 211 ukuya esiteshini seLionel-Groulx Metro noma isitimela sezokuhamba ukuya esiteshini saseWestsor kanye neVendome Metro.
I-Amtrak isebenza ngendlela evelele, isitimela sehora eli-11 esivela eNew York Penn Penn esilandelayo i-Hudson River neLake Champlain kusuka ku-$ 69 ngayinye indlela.
Via Rail inikeza inkonzo yonke elaseCanada. Imizila yesampula nezindleko:
I-Toronto - Montrea l: iDowntown ukuya edolobheni, amahora amahlanu; kusuka ku-$ 44 enye indlela
I-Montreal - Ottawa: Amahora amabili; kusuka ku-$ 33 ngendlela eyodwa
I-Montreal - IQuebec City: Amahora amathathu; kusuka ku-$ 33 ngendlela eyodwa
Ukusebenzisa kabusha eMontreal: Ukusetshenziswa kabusha okungahle kwenzeke futhi okungahle kwenziwe kabusha
Ukujoyina ama-Cooperative Food Cooperatives
I-Blood Alcohol Inciphisa EQuebec: Imithetho Yokuphuza Nokushayela eMontreal
I-Montreal Music Venues, Amakhonsathi, Imicimbi ye-Musical nemibukiso ebukhoma
I-California Academy of Sciences: Isiqondiso Sokuvakashelwa Kwakho
I-Metropolis eMetrotown - Isikhungo esikhulu sokuthenga se-BC
I-Skate Westgate Holiday I-Outdoor Ice Rink e-Glendale, AZ
I-Club Med Punta Cana - AmaKilabhu Azingane
Igalari yezithombe: I-Hay Bale Art e-Killington, e-Vermont
Okushiwo yiNhlekelele YaseCatalin Ukuze Uhambo Oluya eSpain
I-Pistoia, Italy, Umhlahlandlela Wokuhamba
Izindawo Ezinhle Zokuhlala eSigramento
I-Albuquerque International Balloon Fiesta
Izindawo zase-Akron naseCanton zokuthenga
Izindawo zokudlela ze-Vancouver ku-Diners ye-Food Food, iDrayivu-ins ne-Dives
Ukufika Around Bangkok ngeSikhumbi
Trier - Vakashela Idolobha Elidala kunazo zonke eJalimane